के हो तान्त्रिक यौन सम्पर्क ? – Rajdhani Daily
काठमाडौं । शारीरिक सम्बन्धका विभिन्न तरिकाका बारे धेरै थरि बहस हुन्छ । यीनै बहसहरु मध्ये पछिल्लो पछिल्लो समय चर्चा सुरु भएको छ तान्त्रिक यौन सम्पर्कको ।
केही अनुसन्धानले तान्त्रिक यौन सम्बन्धमा सहभागी जोडीले भरपुर सन्तुष्टि पाउने उल्लेख छ । पछिल्लो अध्ययन अनुसार युवाहरु तान्त्रिक यौन सम्बन्धमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।
के हो तान्त्रिक यौन सम्बन्ध ?
शरीर नछोइकन सामिप्यता महसुस भएपछि मात्र अन्य क्रियाकलाप क्रमश सक्रिय हुन थाल्छन् । दुवैजना भावनात्मक रुपले तयार भएपछि सामान्य विधिबाट गरिने यौन क्रियालाई तान्त्रिक यौन सम्बन्ध भनिन्छ ।
नेपाल, भारतलगायत दक्षिण एसियाका विभिन्न देशमा यो यौन सम्बन्धको तरिका बढ्दै गएको एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेको छ ।
(Visited 1,333 times, 30 visits today)
उपसचिव बढुवाविरुद्ध सरकारकै अधिकृत सर्वोच्चमा, १ सय… (9,404)